Faah Faahin: Dhimashada Dagaalkii Bariire Oo Gaartay 23 Askari iyo Al Shabaab Oo Gaadiid Qabsatay.
Friday September 29, 2017 - 10:09:37 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalkii cuslaa ee saaka ka bilaawday deegaanka Bariire duleedka degmada Afgooye gobolka Shabeelaha Hoose.
Ciidamo katirsan Al Shabaab/Alkata'ib Media
Dagaalka oo ku billaawday gaadiid walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo lagu weeraray saldhigyada Maleeshiyaadka Bangaraafta ee Mareykanku Tababaray ayaa ku fiday xaafadaha deegaanka waxaana markii dambe dagaalyahanada Al Shabaab u suurtagashay in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku heynta Bariire.
Khasaara lixaad leh ayaa maleeshiyaadka Bangaraafta kasoo gaaray dagaalka, goob joogayaal ayaa sheegay in Meydad go’go’ay lagu arkay afaafka hore ee saldhigyadii qaraxyada lala beegsaday illaa iyo duleedka Bariire halkaas oo firxadkii maleeshiyaadka ay ku baacsadeen ciidamo katirsan Xarakada SHM.
War ay baahisay idaacadda Andalus ayay ku sheegtay in dhimashada ka dhalatay dagaalkii Bariire ay gaartay 23 Askari halka mujaahidiintu ay dagaalka ku qabsadeen 11 gaari oo 6 kamida ay yihiin gaadiidka Tiknikada loo yaqaan oo qoryo waaweyn ku rakibanyihiin.
Boqolaal dagaalyahan oo aad uhubeysan ayaa gudaha Bariire lagu arkay waxayna kor ulalminayeen Calanka Madoow ee dhaxda ku leh Kalimadda Towxiidka, ciidamada AMISOM ee saldhigga ku leh garoonka diyaaraha NO.50 oo qiyaastii 6KM ujira Bariire wax gurmad ah umasoo fidin maleeshiyaadka Soomaalida ee lagu laayay deegaanka.
Al Shabaab waxay sheegtay in weerarkii Bariire loogu aargudayay dad shacab ah oo bishii lasoo dhaafay ay ciidamada Mareykanka iyo Maleeshiyaadka Soomaalid ah ku xasuuqeen dhul beereedka deegaanka Bariire.
wixii warar ah ee kusoo kordha weerarka Bariire wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha’allaah